कस्तो छ बिमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था? कसरी पुर्याउँदै छन् तोकिएको चुक्ता पुंजी ? (बिशेष रिपोर्ट)
नियमन निकाय बिमा समितिले विमा कम्पनीको नयाँ चुक्ता पुंजीको सिमा तय गरेको छ। लामो समय देखि चर्चामा रहेको बिमा कम्पनीको चुक्ता पुंजीको अन्यौलतालाई तोड्दै समितिले बिमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुंजी ४ गुणाले बढाउने निर्णय गरेको हो।
समितिले जिबन बिमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुंजी ५० करोडबाट बढाएर २ अर्ब तथा निर्जिबन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुंजी २५ करोडबाट बढाएर १ अर्ब पुर्याउने निर्णय गरेको विमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बिजपाटीलाई बताएका छन। उनका अनुसार तोकिएको चुक्ता पुंजी बिमा कम्पनीहरुले २०७५ असार मसान्तसम्म पुर्याउनु पर्ने छ।
अध्यक्ष चापागाईका अनुसार उक्त निर्णय आजै देखि लागु हुने भएको छ। बिमा समितिको नयाँ चुक्ता पुंजी वृद्धि योजना अनुसार हाल संचालनमा रहेका ७ वटा जिबन बिमा कम्पनीले २ अर्ब र १५ वटा निर्जिबन बिमा कम्पनीहरुले १ अर्ब चुक्ता पुंजी पुर्याउनु पर्ने छ।
विमा समितिले बिमा कम्पनीको नयाँ चुक्ता पुंजी सिमा तय गरेसंगै कुन बिमा कम्पनीले कति चुक्ता पुंजी थप गर्नु पर्छ भन्ने चर्चा सुरु भएको छ। हाल संचालनमा रहेका बिमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुंजी कति छ ? कसले कसरि कति चुक्ता पुंजी वृद्धि गर्ने छ भन्ने बारे पाठकहरुको यस चांसोलाई हामिले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौं। प्रस्तुत छ बिजपाटीका लागि जनोम पाठकले तयार गरेको रिपोर्ट:
जिबन बिमा कम्पनीहरु:
निर्जिबन बिमा कम्पनीहरु :